Mareykanka oo Soo Farageliyey Khilaafka Ka Taagan Arrimaha Jubbooyinka & Danjiraha Mareykaanka oo Saddex Habeen Muqdisho Ku Hoyday (Warbixin) |
Mareykanka oo Soo Farageliyey Khilaafka Ka Taagan Arrimaha Jubbooyinka & Danjiraha Mareykaanka oo Saddex Habeen Muqdisho Ku Hoyday (Warbixin)
Khilaafkii u dhexeeyay dawlada federaaalka iyo maamulka ku-meelgaarka Kismaayo ee ku saabsanaa dhismaha maamul loo sameyn doono deegaanada Jubbooyinka ayaa hadda waxaa ugu dambeyntii soo faragelsay dawlada Mareykanka oo rabta in arrinta xal laga gaaro, sidaasi waxaa Raxanreeb maanta u sheegay sarkaal ku dhow Villa Soomaaliya.
Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya James Swan ayaa tan iyo maalinimadii Isniinta ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo kulamo la yeeshay madaxweynaha, raysul wasaaraha iyo saraakiil dawlada ka tirsan oo dhammaantood uu kala hadlay arrimaha Jubbooyinka iyo mowqifka ay ka taagan tahay dawlada qaabka loo yagleelayo maamulada gobollada gaar ahaan gobollada Jubbooyinka.
Il wareedka ayaa sheegaya in Danjire Swan oo madaxweynaha, raysul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ka xogwareystay sidii ay ku soo bilawdeen qorshayaasha maamul dhisida ee laga wado gobollada Jubbooyinka, iyadoo dhanka kalana la isla soo qaaday arrimo dhan amaanka gobolladaasi ku saabsan oo ay ku jirto iska horimaadyo dhowaan ka dhacay Kismaayo kuwaasoo la sheegay inaysan u adeegeynin amaanka guud ee dalka iyo xasiloonida.
Danjiraha Mareykanka iyo masuuliyiintii la kulmay ee dawlada ayaa isku waafaqay in dawlada ay qaadato hogaaminta qorshaha maamul sameynta dhammaan gobollada dalka ee aan hadda ka jirin wax maamul ah, waxayna dawlada dhinaceeda ku adkeysatay inay rabto in hawlaha socda laga qeybgaliyo dhammaan beelaha deegaanka iyadoo dawladu ay ku caawineyso illaa afar mashruuc oo ay ka mid tahay dhismaha saldhigyada booliska, dugsiyada waxbarashada iyo taageerosiinta maamul kasta oo dadka ay soo doortaan.
Dawladu waxay ka cabatay in dawlada Kenya, oo ciidamadeeda ka midka ah AMISOM ee ku sugan Kismaayo aysan u adeegeynin danaha dawlada Soomaaliya taasina ay abuuri karto dhibaato amni oo hor leh, arrintaasi oo danjiraha Mareykanka sheegay inuu kala hadlayo dawlada cusub ee Kenya iyo madaxda ciidamadooda.
Saacid oo Kismaayo tagi doona
Raysul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa u sheegay danjiraha Mareykanka markii uu la kulmay inuu rabo in isagu [raysul wasaaraha] iyo wafdi uu hogaaminayo ay dhowaan booqdaan magaalada Kismaayo, booqashadaasina ay noqon doonto mid dhabbaha u xaarta dib u bilaabida shir ka ballaaran midkii horey uga furmay Kismaayo kaasoo raysul wasaaruhu ku micneeyay “mid dadkoo dhami ka soo wada qeybgali karaan”.
Dawlada Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka ee taageera dawlada federaalka Soomaaliya ayaa beryahanba walaac ka muujinayey arrinta Kismaayo, walaacaas oo sii kordhay markii dawladu ay ku dhawaaqday inaysan aqoonsaneyn shirka Kismaayo ka furmay 28-kii bishii Febraayo iyo warar tilmaamayey in xiisado colaadeed ay ka soo cusboonaadeen gobolka.
Faragelinta dawlada Mareykanka ee ku aadan arrimaha Jubbooyinka ayaa la rajeynayaa inuu soo afjaro ismariwaaga ka taagan maamul dhisida Jubbooyinka ee beryahan dambe sida weyn loo hadalhayey waxaase ilo wareedyadu sheegayaan in ugu yaraan madaxda dawlada loo sheegay wax ay ku qanci karaan oo ku aadan go’aankii ay horey ugu dhawaaqeen.